Giraanta Ciyaaraha Kubadda Cagta Iyo Xalqada Fasalka, Soosaarayaasha Giraan Gaar ah | Dharka Dharka
Byer Jewelry waa soosaarayaasha giraanta caadada ugu fiican Ku soo dhawow inaad soo booqato warshaddeena.
Soo-saarista Wax-soosaarka Qurxinta ee Xaddidan. waa warshad dahabka ugu fiican Shiinaha, waxaan ku takhasusay soo saarida giraan dhaqameedka. Alaabooyinkayaga oo ay ka mid yihiin Giraan nooca loo yaqaan 'Championship Ring, Class Ring, Ring Ring', Ring Ring iyo Masonic Ring. Bixinta Adeegyada Qurxinta Macaamiisha, sidoo kale nala soo xiriir.
Giraanta Koobka Horyaalnimada
Naqshadayaasheena xirfadleyda ah waxay sameyn karaan farshaxan 3D oo bilaash ah sida codsiyada macaamiisha 12 saacadood gudahood waxayna ku sameyn karaan isbeddello waqtigooda ku habboon. Magaca cayaareed ee kala duwan, lambarka iyo booska ayaa noo banaan. Waxaan sidoo kale u habeyn karnaa dhagxaanta qaabab iyo midabbo kala duwan.
Giraanta Fasalka Qaaska ah
Ma waxaad raadineysaa faraanti naftaada ama kooxdaada Waxaan kaa caawin karnaa inaad taas badbaadiso. Kooxdayada naqshadeynta khubarada ayaa kula shaqeyn doonta adiga si aad u abuurto qeyb farshaxan ah. Waad ku habeyn kartaa magaca dugsiga, magaca ardayga iyo sannadka qalin-jabinta giraanta.
Giraanta Militari ee gaarka ah ee ragga
Astaan ​​u ah sharafta iyo guusha kooxdaada, kaalay oo samee giraan noo gaar ah. Waxaad ku yeelan kartaa astaantaada astaanta giraan.
Giraanta Saxeexa Gaarka ah
Adigu waxaad udegsaneysaa ficil aad adigu kuso bandhigi laheyd gurigaaga? Wecanhelpyouacheivethat. Ourexpert designteamwillworkwithyoutocreatapieceofart. Magacaaga waad iska iibin kartaa, yearandspeciallogoonther.
Haddii aad raadineyso faraanti naftaada ama koox gaar ah, waan kugu daboolnay. Kooxdayada xirfadleyda ah ee naqshadeynta 3D ayaa kula shaqeyn doonta si ay kuu abuuraan naqshad gaar ah.
1. Dooro hal shax.
2. Noo soo dir astaamahaaga oo noo sheeg meesha aad rabto inaad astaamaha dhigato.
3. Waxaan kaa dhigi karnaa naqshadaha 3D.
4. Waxaan kuu soo dirayaa qaansheegta ka dib markaad xaqiijiso naqshadeynta.
5. Soo saarista kadib bixinta.
6. Adeeg Gaara oo Khaas ah
Waxaa la aasaasay 2006, ByerJewelry waa soo saaraha hormuudka u ah samaynta naqshadeynta dahabka naqshadeynta, wax soo saarka iyo iibinta Shiinaha. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah siddooyinkii Horyaalnimada, Faraantiyo Milateri, Faraantiyo Fasal ah, Faraantiyo Masonic ah, Faraantiyo shirkadeed iyo wixii la mid ah. Magaca cayaareed ee kala duwan, tirada iyo booska ayaa noo diyaar ah Waxaan sidoo kale u habeyn karnaa dhagxaanta qaabab iyo midabbo kala duwan.
Waxaan leenahay warshad xirfadeed noo gaar ah
Warshaddeenu waxay soo saartaa giraan horyaal, giraan fasal iyo wixii la mid ah
Waxaan haynaa koox 3Ddesign xirfad leh
Naqshadayaasheena waxay ku bixin karaan farshaxan 3d lacag la'aan ah 4 saacadood gudahood si loo xaqiijiyo macaamiisha.
Waxaan aqbalnaa qaabeyn gaar ah
Wareegyadeenna waxaa loo qaabeyn karaa magac ciyaaryahan oo kala duwan, Maya POS, iyo dhagaxyo qaas ah.
Waxaan sameyn karnaa isbadal qaas ah hadaad qaldan tahay
Kooxda Nakhshadeynta 3D.
Waxaa la aasaasay 2006, Byer Jewelry Limited waa soo saaraha hormuudka u ah samaynta naqshadeynta dahabka naqshadeynta, wax soo saarka iyo iibinta Shiinaha, waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah siddooyinkii Horyaalnimada, siddooyinkii Milatariga, siddooyinkii Class, siddooyinkii Masonic, siddooyinkii shirkadda iwm Waxyaabaha ugu muhiimsan: 18K, 14K, 10K dahab, lacag, naxaas, bir bir ah, daawaha, Waxay dooran kartaa dhagax CZ, dheeman, dhagax macmal ah.
Kooxdayada naqshadeynta xirfadeed waxay qaabeyn karaan 3D farshaxan bilaash ah codsiyada macaamiisha inta lagu jiro 12 saacadood waxayna ku sameyn karaan isbedel xaqiijinta macaamiisha. Xirfadlayaasheena xirfada leh waxay sameyn karaan MAGAC, Number, POS, dhagxaan qaas ah oo qaas ah, dhaldhalaalka midabka pantone iwm ee giraan kasta iyadoo la raacayo codsiyada macaamiisha. Waxaan sidoo kale leenahay QA xirfad leh, kooxda QC waxaanan sameynay heerar QC faahfaahsan, giraan kastaa mid mid baa loo hubiyey si loo hubiyo tayada ugu sareysa ka hor rarka, isla markaana qancisa macaamil kasta.